XASAASI: Madaxweyne Denni & Axmed Madoobe oo isku dhacay iyo Colaad hor leh oo… - Banaadirsom
Home Arimaha Bulshada XASAASI: Madaxweyne Denni & Axmed Madoobe oo isku dhacay iyo Colaad hor...
XASAASI: Madaxweyne Denni & Axmed Madoobe oo isku dhacay iyo Colaad hor leh oo…
Kadib markii labo habeen ka hor lagu dilay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubadda Hoose Nabadoon Siciid Adoon oo kamid ah ganacsatada ugu caansan gudaha magaalada Kismaayo ee dhalasho ahaan kasoo jeeda deegaanada Puntland ayaa waxaa soo baxayey warar sheegaya in dilkiisa uu ka dambeeyey hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe).
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Denni oo ka shidaal qaadanaya dilka Siciid Adoon ayaa xidhiidh dhanka Telephone-ka ah la sameeyey madaxweyne Axmed Madoobe, isagoona kala hadlay kiiska dilkiisa maadaama hore uu u dhex dhexaadiyey kadib markii marxuunka la dilay uu cabasho ka gaadhsiiyey Axmed Madoobe ka gaadhsiiyey Denni.
Siciid Adoon ayaa Axmed Madoobe ku lahaa lacag dhan 600,000 oo Dollar, waxaana uu dhisay wasaarado iyo xarumo dowladeed oo madaxda Jubbaland ay haatan ku shaqayso.
Qadaraasyada dhismaha ah ayaa la sheegay in uu ka qaadan jiray Axmed Madoobe, iyadoona maalmihii ugu dambeeyey ay isku hayeen lacago lagu lahaa Axmed Madoobe oo uusan ka helin marxuunku taas oo sababtay in ay u kala garnaqaan isaga iyo Axmed Madoobe madaxweynaha Puntland iyo Xildhibaan Faroole xiligii caleema saarkiisa.
Denni ayaa ku canaantay Axmed Madoobe sababaha loo dilay marxuunka iyo waxyaabaha kusoo beegay dilkiisa haatan xili la kala dhexgalay labadooda hasa yeeshee Mr. Madoobe ayaa isku difaacay in uusan wax xog ka haynin dilkaasi isla markaasna uusan wax lug ah ku lahayn balse baadhitaan xoogan ay wadaan xiligani ciidamadiisu.
Madaxweyne Denni ayaa la sheegay in uu aad uga xumaaday dilalka iyo dhibaatooyinka lagu hayo cidkasta oo kasoo jeeda Puntland oo ku sugan Kismaayo, waxaana arintani ay sababi kartaa in cilaaqaadka ka dhaxeeya labada dhinac ee Jubbaland iyo Puntland uu xumaado sababo la xidhiidha beegsiga lagu hayo waxgaradka iyo haldoorada kasoo jeeda Puntland ee ku dhaqan magaalada Kismaayo.
Banaan baxyo xoogan ayaa ka dhacay magaalooyinka Kismaayo iyo Garoowe kadib dilkii Siciid Adoon, waxaana afhayeen u hadlay wasaarada Amniga Jubbaland uu sheegay in ciidamadu ay gacanta kusoo dhigi doonaan cid walba oo ka dambaysay dilkiisa.
Xaafadaha magaalada Kismaayo qaarkood ayaa la sameeyey hawlgalo, waxaana gacanta ciidamadu ay kusoo dhigeen maalintii shalay ahayd dad kala duwan oo looga shakiyey amni xumada ka jira Kismaayo inkastoo aanan weli la cadayn cidii dishay Siciid Adoon iyo shakhsiyaad kale oo kasoo jeeda Puntland oo Kismaayo lagu dilay.